Tigidhada Tareenka Eurostar ee Jaban iyo Qiimaha Safarka | Save A tareenka
Tigidhada Tareenka Eurostar ee Jaban iyo Qiimaha Safarka
Home > Tigidhada Tareenka Eurostar ee Jaban iyo Qiimaha Safarka
Halkan waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan Tigidhada tareenka Eurostar ee jaban iyo Qiimaha safarka ee Eurostar iyo faa iidooyinka.
mawduucyada: 1. Eurostar waxaa qoray iftiiminta tareenka
2. Ku saabsan Eurostar 3. Indheergaradka si aad uhesho Tigidhada Tareenka Eurostar oo Jaban
4. Waa imisa qiimaha tikidhada Eurostar 5. Maxay ugu fiican tahay inaad qaadato tareenka Eurostar, oo aan lagu raacin diyaaradda
6. Maxay ku kala duwan yihiin Heerarka, Horyaalka Premier League iyo Ganacsiga ee Eurostar 7. Ma jiraa diiwaan gelinta Eurostar
8. Muddo intee le'eg kahor bixitaanka si ay u yimaadaan 9. Waa maxay jadwalka tareenka ee Eurostar
10. Saldhigyadee ayay adeegsan doonaan Eurostar 11. Eurostar FAQ
Eurostar waxaa qoray iftiiminta tareenka
Shirkadda Eurostar ayaa la bilaabay 14-kii November 1994
Mid ka mid ah tareenka ugu dheereeya Yurub waa Eurostar, Xawaaraha ay Eurostar ku dhufato waa 320km saacaddii
Qolka Eurostar Channel Tunnel waa 50.45 km dheer ama 31.5 miles. Taasi waa u dhiganta 169 Eiffel Towers ayaa ku dhegan midba midka kale
2h15 ee waqtiga safarka ee u dhexeeya Paris iyo London diyaaradda Eurostar
Markaad la safrayso Eurostar-ka Ingiriiska ilaa Yurub, waad heshay 1 saacad dib ugu soo noqo
Isgoyska Channel Tunnel ayaa qaadanaya 35 daqiiqo
Tareenka xawaaraha dheereeya ee Eurostar waa adeeg isku xiraya Galbeedka Yurub iyo London iyo Kent ee Boqortooyada Midowday, Xiriirimaha ka socda Yurub waa Paris iyo Lille ee Faransiiska, Brussels, iyo Antwerp ee Biljamka, Rotterdam iyo Amsterdam ee Nederland. Sidoo kale, waxaad ka heli kartaa tareenka London ilaa Disneyland Paris (Saldhigga Tareenka ee Marne La Vallee) iyo sidoo kale xilliyada xilliyada gudaha Faransiiska Sida Marseilles iyo Moutiers ee Alps-ka Faransiiska. Dhammaan tareennada Eurostar waxay ka gudbaan kanaalka Ingiriisiga iyagoo sii maraya Channel Tunnel.
The Adeegga tareenka ee Eurostar tareenadu waxay ku socdaalayaan illaa 320 km saacad khadka tareenka xawaaraha ku socda. Tan iyo markii Eurostar uu bilaabay inuu ka shaqeeyo gudaha 1994, Khadad cusub ayaa laga sameeyay Beljamka iyo Boqortooyada Midowday si loo yareeyo waqtiyada safarka ee udhaxeeya safarada Eurostar. Mashruuca laba geesood ee Qalliinka Tareenka isku xidha ayaa la dhammaystiray 14-kii November 2007, markii Terminalka London ee Eurostar laga wareejiyay Waterloo International loona wareejiyay London St Pancras International tareenka.
Tag Kaydi Bogaga Tareenka ama u isticmaal aaladdaa 'widget' si aad u raadiso waxay tababartaa tikidhada Eurostar
Indheergaradka si aad uhesho Tigidhada Tareenka Eurostar oo Jaban
Tirada 1: Ballanso tigidhadaaga Eurostar intii aad karto
Tigidhada tareenka ee Eurostar waa la heli karaa inta u dhaxaysa 3 bilo ilaa 6 bilood ka hor bixitaanka tareenka. Kaadhadhista tikidhada tareenka hore u hubso inaad hesho tikidhada ugu raqiisan iyo tikidhada tareenka ee ugu raqiisan Eurostar aad ayey u xaddidan yihiin. Qiimaha tikidhada tareenka ee Eurostar hoos ayuu u kacayaa marka aad u soo dhowaato maalinta safarka, sidaas si lacag ku keydi iibsiga tikidka tareenka, dalbo inta ugu badan ee suurtagal ah kahor.
Tirada 2: Ku safro Eurostar xilliyada ugu sarreeya
Eurostar, Qiimaha tigidhadu way ka jaban yihiin saacadaha shaqada ka baxsan, bilowga usbuuca, iyo maalintii. Bartamaha usbuucyada safarada tareenka (Talaado, Arbacada iyo Khamiista) had iyo jeer waxay bixiyaan qiimaha ugu jaban. Qiimaha ugu wanaagsan, ha qaadan Eurostar subaxa hore iyo fiidka hore inta lagu jiro usbuuca (sababtuna tahay safarro ganacsi oo badan), sidoo kale iska ilaali inaad raaciso safarada Eurostar fiidka jimcaha iyo axada (ku habboon gubashada marinnada toddobaadlaha), inta lagu gudajiro ciidaha dadweynaha iyo waliba xilliyada ciidaha iskuulka qiimaha Eurostar skyrocket.
Tirada 3: Dalbo tikidhadaaga Eurostar markaad hubto jadwalka safarkaaga
Adeegga tareenka ee Eurostar ayaa baahi weyn loo qabaa haatan, kaliya tareenka tareenka Eurostar ayaa ku shaqeeya tareenada tunnelka kanaalka Ingriiska, Sidaa darteed, tartan ma jiro. Eurostar oo ah tareenka kaliya ee ka shaqeeya wadooyinka u dhexeeya England iyo Galbeedka Yurub ayaa dhigay xadidaada tigidhada tareenka. Kaliya tikidhada Tareenka Ganacsiga Nooca tikidhada tareenka waa la isweydiin karaa, tigidhada kale ee tareenka lama bedeli karo ama lama celin karo, laakiin waxaa jira goobo internetka ah oo aad ku iibin kartid tigidhada tareenkaaga gacanta labaad. Sidaas, Keydso Tareenka Tareenka ee loogu talagalay Safarka Eurostar waa inaad ballansato markaad hubto jadwalka safarkaaga.
Tirada 4: Iibso tikidhadaaga Eurostar Save Train
Save A Train waxay leedahay bixinta ugu badan ee tikidhada tareenka ee Yurub iyo adduunka oo dhan, iyo awooddeena dartood, waxaan helnaa tikidhada Eurostar ugu jaban. Waxaan ku xirnaa wadayaal badan oo tareenada iyo ilaha iyo algorithmkayada tikniyoolajiyadeena waxay marwalba ku siinayaan tikidhada Eurostar ugu raqiisan iyo mararka qaarkood isku darka wadayaasha kale ee tareenka meelaha kale.. Waxa kale oo laga yaabaa inaan helno waxyaabo kale oo beddela Eurostar.
Amsterdam To London tigidhada tigidhada
Paris ilaa London tigidhada tigidhada
Berlin ilaa London tigidhada tigidhada
Brussels ilaa London tigidhada tareenka
Waa imisa qiimaha tikidhada Eurostar?
Qiimaha tigidhadu waxay ku bilaaban karaan € 35 waqtiga xayeysiinta laakiin waxay gaari karaan € 310 daqiiqada ugu dambeysa. Qiimaha Eurostar ku tiirsanaanta fasalka aad doorato. Halkan waxaa ku yaal miis soo koobaya qiimaha celcelis ahaan fasal walba ee London-Paris / London-Brussels / Safarada London-Amsterdam:
Jaangooyo 35 € – 190 € 68 € – 380 €
Lille ilaa London tareenka
Maxay ugu fiican tahay inaad qaadato tareenka Eurostar, oo uusan ku safrin Diyaaradda?
1) Faa'iidada safarka Eurostar waa inaad tagto oo aad toos u tagto bartamaha magaalada mid ka mid ah magaalooyinka aad ka safrayso, Tani waa wax si gaar ugu ah tareenada, marka haddii aad tababarto safarka Paris, Brussels, Amsterdam, Rotterdam, Antwerp, Lille ama London tani waa faa iido weyn Eurostar. Marka ay timaado in Qiimaha Eurostar, had iyo jeer way kala duwan tahay. Xayeysiinta qaarkood ayaa kuu oggolaanaya inaad hesho tikidhada jaban ee Eurostar. Laakiin maalmihii ugu dambeeyay kahor bixitaanka, qiimayaashu way sii kordhayaan. Hadaad jeceshahay inaad si sahlan u safarto, Eurostar adiga ayaa iska leh!
2) Ku safridda diyaaradda waxay leedahay habraacyada amniga maddaarka, taas micnaheedu waa inaad ugu yaraan noqotid 2 saac ka hor bixitaankaaga qorsheysan, Eurostar waxaad u baahan tahay inaad caddaalad sameyso 1 saacad ka hor. Sidoo kale, waa inaad ka raacdaa garoonka diyaaradaha bartamaha magaalada. Markaa hadaad tiriso waqtiga safarka oo dhan, Eurostar wuxuu had iyo jeer guuleystaa wadarta waqtiga safarka.
3) Mararka qaarkood qiimaha tareenka wuu ka sarreeyaa diyaaradda oo qiimaha wajiga tigidhada, laakiin isbarbardhiga waa inuu kujiro, imisa ayay kugu kacaysaa inaad geyso waddo kasta oo gaadiid ah garoonka diyaaradaha, marka lagu daro xaaladaha qaarkood waxaad sidoo kale heleysaa waqti firaaqaa goorta safarka Eurostar, iyo marka ugu dambeysa Eurostar ma lihid khidmadaha boorsada.
4) Diyaaraduhu waa mid ka mid sababaha keena in ay wasaqeeda sare usocoto, heerka isbarbardhiga, tareenadu waa jawi saaxiibtinimo badan, iyo haddii aad barbardhigto diyaaradda si aad u tababarto safarka, Safarka tareenka waa 20x ka yar kaarboon-hawada ka yar inta ay diyaaraduhu ka badan yihiin.
Luxembourg To tikidhada London
Antwerp tigidhada London
Rotterdam tigidhada London
Lyon ilaa tigidhada London
Maxay ku kala duwan yihiin Heerarka, Standard Premier, iyo Horyaalka Ganacsiga ee Eurostar?
Tareenada Eurostar waxay leeyihiin adeegyo fasal oo dhowr ah oo loogu talagay miisaaniyad kasta, iyo nooc kasta oo safar ah, haddii aad tahay safar ganacsi ama firaaqo ama labadaba 🙂
Tigidhada Caadiga ah ee Eurostar:
The Tigidhada Eurostar Standard ayaa ugu jaban dhammaan qiimaha lagu heli karo. Waxaa ugufiican in horay loo sii dalbado tigidhada tareenka, sababtoo ah tigidhada caadiga ah ee qiimaha jaban – si dhakhso leh ayey u iibiyaan. Safarrada haysta tikidhada caadiga ah way qaadan karaan 2 shandadaha + 1 qaado boorso bilaash ah. Rakaabyada Tikidhada Caadiga ah ee Eurostar waxay sidoo kale ku raaxeysan karaan WiFi bilaash ah iyo xulasho kursi. Tigidhada caadiga ah badanaa lama soo celin karo.
Tigidhada Heerka Sare ee Eurostar:
Fasalka tigidhadan ayaa ka qaalisan nooca tikidhada caadiga ah ee nooca Eurostar, ah Tigidhada Heerka Sare waxay bixiyaan adeegyo dheeri ah. Marka lagu daro faa'iidooyinka tigidhada caadiga ah ee aan kor ku soo qorney, Tikidhada Heerka Sare waxay bixiyaan kursi ka fiican oo leh qol badan, Xulasho balaadhan oo joornaalada iyo joornaalada ah ayaa bilaash ah, oo waxaa lagu siin doonaa cunno fudud iyo cabitaan kursigaaga dushiisa Eurostar. Tikidhada Heerka Sare ayaa lagu beddeli karaa iyadoo la eegayo khidmad ku xiran halkaad u socoto.
Tigidhada Horyaalka Ganacsiga ee Eurostar:
The Tikidhada Tartanka Ganacsiga ee Eurostar iibsadayaashu way ku raaxeysan karaan faa'iidooyinka aan kor ku soo sheegnay laakiin sidoo kale, Rakaabka Rugta Ganacsiga ee Eurostar ayaa ka faa'iideysan doona 3 shandadaha boorsada halkii 2, Liis kulul oo qaali ah oo uu habeeyay cunto-yaqaanka caanka ah Raymond Blanc, Rakaabka Rugta Ganacsiga ayaa ku raaxaysan kara barxad ka hor intaanay fuulaan tareenka jidka loo maro London ama London, waxaa intaa dheer baaritaan-gaar ah oo keliya 10 Daqiiqado iyo adeegga boos celinta taksi oo keliya iyaga. Tan ugu muhiimsan, tigidhada noocaan ah ee tikidhada tareenka ee Eurostar Business Premier Train wuxuu kuu oggolaanayaa socdaal rogrogmi kara: waad beddeli kartaa oo burin kartaa safarkaaga, bixitaankaaga ka hor ama ilaa 60 maalmood kadib bixitaankaaga, dhammaantood lacag la'aan.
Ma jiraa diiwaan gelinta Eurostar?
No, iyo liddi ku ah, Eurostar waxaa kaliya lagu taageeraa dhibco dhibic ama tigidhada dhibcaha mana taageerayso wax kaararka safarka ah, laakiin haddii aad safar badan u raacdo Eurostar waad ku biiri kartaa naadiga 'Eurostar Club', kani waa barnaamij daacada oo ku siinaya inaad soo aruuriso dhibcaha safarka si aad ugulaabato dhibcohan tigidhada ama sicir-dhimista. Waad kasbataa 1 u fiirso £ 1 kasta oo aad qarash gareysay oo qodobbadaani waxay xaq kuu siinayaan mudnaan gaar ah:
– From 200 Dhibco: Waxaad ku heli tigidhada Eurostar qiimo dhimis ah.
– Hadaad tagto 500 Dhibco: waad heli kartaa 1 tayeynta adeegga tareenka.
– Iyo hadaad ku guuleysatay inaad gaarto 1,000 Dhibco: waad soo furan kartaa 1,000 tilmaama safarka wareega Eurostar ilaa London laga bilaabo meel kasta oo Galbeedka Yurub ah.
Muddo intee le'eg kahor bixitaanka si ay u yimaadaan?
Si aad u hesho Eurostar-kaaga oo aad wakhtigeeda ku habboon tahay, wadada tareenka waxay kugula talineysaa inaad ugu yaraan timaadid 1 saac ka hor intaanu tareenkaagu Eurostar bixin. Waxaan ku jirnaa Save A Tareenka tan iyo markii aan inbadan safrinay tareennada Eurostar in tani ay tahay waqti ku filan oo haddii safka dulucda baasaboorku uusan sii dheeraaneyn., sidoo kale waad ku raaxeysan kartaa dukaamada waxaadna ka heli kartaa waxyaabahaas aad ugu baahan tahay safarka tareenka inuu noqdo sidii ugu macquulsan oo macquul ah.
London ilaa tareenka Marseilles
London ilaa Tareenada Moutiers
London ilaa Bourg Saint Maurice Trains
Waa maxay jadwalka tareenka ee Eurostar?
Tani waa su'aal adag iyo mid ay Save A Train kaga jawaabi karto waqtiga dhabta ah, aad boggayaga bogga kuna qor asalkaaga iyo halkaad u socotid, oo waxaad ka heli kartaa tan ugu saxsan Jadwalka tareenka Eurostar waxaa jira, Waxaa jira tareeno ka socda 7 subaxdii ilaa 9 fiidkii mid kasta oo ka mid ah jidadka Eurostar iyo waddooyinka ugu mashquulka badan sida Paris ilaa London ama London ilaa Paris, waxaad leedahay tareenada Eurostar oo socda saacad kasta nus saac, kaliya waa inaad doorataa tikidhada saxda ah ee Eurostar oo ku habboon jadwalka safarkaaga.
Tikidhada tareenka ee London ilaa Antwerp
London ilaa tikidhada tareenka Rotterdam
Disneyland Marne-la-Vallee tigidhada tareenka London
Tikidhada tareenka London ilaa Lille
Saldhigyadee ayay adeegsan doonaan Eurostar?
Saldhigga tareenka Paris ee Eurostar ayaa la magacaabay Paris Gare du Nord, saldhigga tareenka wuxuu ku yaal degmada 10aad ee Paris, taas oo ah +-30 daqiiqado socod ka socda Cathedral Notre Dame. Si aad u qaadato Eurostar, waa inaad gasho saldhiga oo aad tagtaa 1 dabaqa gudaha Gare du Nord iyadoo la adeegsanayo lifaaqayaasha ku yaal bartamaha xarunta.
Kulankii Disneyland Paris, Eurostar ayaa timid xarunta Marne La Vallee Chessy, oo ku yaal 5 daqiiqado soconaya Disneyland Resort iyo Disneyland Hotels. Waxaa ku dhex yaal meel kaydinta shandadaha bidix ay ku dhex yaalaan rugta waxaadna ku raaxeysan kartaa beerta adigoon ka walwalayn xamuulkaaga qaaliga ah.
Magaalada London, Maalmahan tareenada Eurostar way baxaan wayna yimaadaan Xarunta Caalamiga ee St Pancras, oo ku yaal woqooyiga magaalada London. Ka hor 2007, Tareenada Eurostar waxaa loo adeegsan jiray inay yimaadaan Xarunta Waterloo ee London.
The Brussels Midi-Zuid (Brussels South) saldhigga wuxuu ku yaal bartamaha bartamaha Brussels, laakiin hubi inaad fahanto inaad ubaahantahay Brussels Midi-Zuid iyo Saldhigga Dhexe ee Brussels, Xarunta tababarka tareenka ee Midi-Zuid waxay leedahay 22 tareenka meelaha, iyo xafiiska tigidhada Eurostar waxay ku yaalliin barxada 8. Tikidka tareenka ee Eurostar wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si xor ah ugu dhex safarto Brussels Midi Zuid iyo Brussels Central.
Amsterdam Centraal (Amsterdam Central Station) wuxuu ku yaal bartamaha magaalada Amsterdam midigta wabiga, markaad ka baxdo xarunta tareenka, Waxaad ku aragtaa Amsterdam Main Street oo buuxa oo soo jiidasho leh sida madame Tussauds oo aan ka imaanayn sidoo kale degmada Ilayska Cas. Sida saldhigyo tareeno badan oo waaweyn oo ku yaal Yurub, Waxaad haysataa dekado shandado oo goor hore furmaya oo soo daaha haddii aad dooneysid inaad booqato 1 maalin ama ka hor intaadan iska hubin hoteelkaaga.
Lille, aad haysato 2 saldhigyada tareenka oo aan ka fogayn midba midka kale, laakiinse waa inaad xusuusataa Rabbiga Terminalka Eurostar ee Lille, waa Lille Yurub iyo maaha Lille Flandres, laakiin xitaa haddii aad taas u fududayso inaad khalad samayso, saldhigyada tareenka waa 5 Daqiiqado ka fog midba midka kale.
Xarunta Dhexe ee Antwerp waa halkaad u fuuleyso Eurostar magaalada Antwerp magaalada 2aad ee ugu weyn Beljam, Hadaad ka safarto Antwerp, Waxaan kugula talineynaa inaad runtii timaadid xarunta tareenka muddo ka dheer wixii lagu taliyay 1 saac kahor bixitaanka maxaa yeelay tani waa tan saldhigga tareenka ayaa ku guuleystay abaalmarinno ku saabsan qurxinta iyo qaab dhismeedka waxayna leedahay 5 sagxadaha dhulka iyo sida ugu fiican ee loo dhex maro.
Markaad ka safreyso iyo aadid Rotterdam, waad adeegsan doontaa Xarunta Dhexe ee Rotterdam ama magaceeda dhasha Bartamaha Rotterdam, Saldhiggan tareenka waxaa loo dhisay sidii suuq yar oo laga dukaameysto oo laga soo galo gudaha, si aad ugu raaxeysan karto dukaamaysiga fiican ka hor iyo ka dibba Safarka Eurostar.
Maxaan ku soo qaadan karaa Eurostar?
Isu keenista naftaada safarkaaga Eurostar waa muhiim, laakiin dusha sare waa inaad hubisaa inaad haysato dukumintiga safarkaaga Eurostar, kale waa in uu lahaadaa waa baasaboor shaqeynaya mar walbana waa way fiican tahay inaad lahaato caymis safar.
Shirkadda ay leedahay Eurostar?
Shirkadda leh Eurostar, looma magacaabay si la yaab leh Eurostar International Limited, 55% oo ay leedahay SNCF, 30% CDPQ Kanada, 10% Hermes Federated iyo wixii haray waxay ka tirsan yihiin jidadka tareenka ee Biljamka, SNCB.
Eurostar FAQ-ga oo ku saabsan Xagee la aadi karaa Eurostar?
Marka laga reebo Paris, London, Amsterdam iyo Brussels, Rotterdam, iyo Lille, Eurostar wuxuu kaloo shaqeeyaa khadad xilliyeed. Xilliga xagaaga, intii u dhaxeysay bilihii Luulyo iyo Sebtember, qaar ka mid ah tareennada Eurostar ayaa si toos ah ugu taga Avignon iyo Marseilles, halka lagu jiro bilaha jiilaalka, intii u dhaxaysay Disembar iyo Abriil, Tareennada Eurostar waxay si toos ah ugu tegi karaan gobollada Alps sida Moutiers ama Bourg St Maurice kuwaas oo ah magaalooyinka ugu muhiimsan ee looga tegi karo meelaha lagu ciyaaro Ski sida La Plange, Xulashada kuwa, Tignes iyo Val Thorens.
Waa maxay nidaamka u degsan Eurostar?
Markii aad tagtid xarunta tareenka iyo aagga loogu talagalay, waxaad iskaan ah tigidhada tikidhada Eurostar, Maalmahan dadku waxay door bidaan inay isticmaalaan lambarka QR, laakiin sidoo kale waad haysan kartaa koobi adag oo tigidhada tareenkaaga ah oo waad iskaankartaa, markaa waa inaad maraysaa baaritaan amniga ah (kuwaas oo aad uga dhaqso badan madaarada), u tag kantaroolka Baasaboorrada oo ka gudub xuduuda ka dibna waxaad u lugeeysaa tareenkaaga iyo habka aad u leedahay dhowr dukaanno ama Fadhi lagu galo Eurostar, Fiidiyowga soo socda waxaad ku arki kartaa geedi socodka oo dhan laga bilaabo markaad timaado saldhigga tareenka illaa aad fuusho tareenkaaga Eurostar.
Waa maxay adeegyada Eurostar?
Waxaa jira meel tareenka Eurostar ah oo u heellan cabitaannada iyo cuntada fudud ee tareenka Eurostar, Liistada waxaa ku jira ismaris, shukulaatada shukulaatada, cunto fudud, baararka shukulaatada, kafeega, shukulaato kulul ama shaah. Ka dib waad ku cuni kartaa oo ku cabbi kartaa gaariga tareenka maqaayada ama waxa aad ku soo iibsatay kursigaaga dib. Waxaad ku isticmaali kartaa kuraasta korantada ee ku xigta kursigaaga tareenada Eurostar.
Sidee ayaan ku aadaa London St. Shirkadda Pancras International inay qaadato tareenka Eurostar?
Sida baahiyaha gaadiid kasta ee London ka jira, Adeegsiga dhulka hoostiisa ee London si aad u tagto St Pancras International Station waa habka ugu fudud. Lix xarumood oo dhulka hoostiisa ah ayaa kaladuwan saldhigga Royal Cross Station halkaasna waad lug lugayn kartaa ilaa St Pancras International daqiiqado gudahood. London St Pancras International sidoo kale dhowr daqiiqo ayey ka socotaa xarunta tareenka ee Euston haddii aad ka timid koonfurta London.
Suurtagal ma tahay in la qaato tareenka Eurostar ee u dhexeeya London iyo Amsterdam?
Tan iyo bishii Abriil 2018, mahadsanid Eurostar, waxaad u safri kartaa inta udhaxeysa London iyo Amsterdam 3-4 saacadood, loomana baahna in wax laga beddelo tareennada magaalada Brussels in kasta oo qaar ka mid ah tareennada Eurostar laga soo bilaabo London ilaa Amsterdam, joogso Brussels, laakiin taasi waxay kuxirantahay tikidhada Eurostar ee aad iibsatid.
Inta badan Dalbashada Eurostar FAQ – Miyay tahay inaan horay u sii qabsado kursi Eurostar ah??
Markaad iibsanaysid tikidhada tareenka ee Eurostar, kuraasta ayaa si otomaatig ah loogu qoondeyn doonaa markii aad sameysid boos celintaada. Hadana haddii ay jiraan kuraas bilaash ah markaad tareenka saaran tahay, Waxaa laguu oggol yahay inaad ku wareegto meel bannaan oo bannaan.
Ma jiraa internet Wixi internet-ka gudaha Eurostar?
Waad ku raaxeysan kartaa Internetka bilaashka ah ee WiFi oo dhan tareenka Eurostar iyo dhammaan fasalada safarka markaad iibsato tikidhada Eurostar horay u sii iibsan.
Hadaad intaas gaadhay, waad ogtahay waxkasta oo aad ubaahantahay inaad ka ogaatid tareenkaaga Eurostar waxaadna diyaar u tahay inaad iibsato tigidhkaaga tareenka ee Eurostar SaveATrain.com
Ma rabtaa inaad boggaan ku dhigto bartaada? Riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-eurostar%2F%0A - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah), Ama si toos ah ayaad ugu xidhiidhi kartaa boggan.
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml waxaadna u badali kartaa / pl in / nl ama / fr iyo luqado badan.